Daawo sida Cabdi Iley u bahdilay Wasiiradii Somaliland oo sida arday la fariisiyay kuraas ?
Friday July 15, 2016 - 01:18:48 in Wararka by Super Admin
Somalilanders.com - Inteeynu xumeeyn laheyn walaalaheena Koofurta bal daawo halkeeynu gaadhnay maanta ?
Somalilanders.com - Inteeynu xumeeyn laheyn walaalaheena Koofurta bal daawo halkeeynu gaadhnay maanta ? Sawirkaani waa Wasiiradii Arrimaha dibadda iyo Gudaha Somaliland oo sidii odayaal shaxaad doontay hoos fadhiya Calankii Ethiopia iyo miis uu kaabe ka yahay Madaxweynaha Maamulka Jigjiga Mr Cabdi Iley.
Su-aashu waxeey tahay , Wasiiro metelaya Jamhuuriyadda Somaliland miyaa maqaamka nuucaasa lagu soo dhaweeyaa ?
Wasiirka Arrimaha dibadda Somaliland soow ma aheyn inuu kulan la qaato dhigiisa Ethiopia ? mise waxaanu neceb nahay walaalaha Koofurta oo Maamulka Jigjiga ayey Wasiiradeenu hoos fariistaan oo sidaa foosha xun lagu qaabilaa ? HALKAAN KA DAAWO
Shacabka Somaliland waa iney xaqiiqsadaan iney dhimatay rajadii aan ka qabnay inaan noqono Jamhuuriyad ,dal madaxbanaan haddii aan si degdega tilaabo looga qaadin kuwa sidaas foosha xun u bahdilay magaceenii Jamhuuriyadda Somaliland.
Gudoomiyaha Jigjiga waxaan qabsanayaa jilbaha , waan tuugayaa oo bilaa sharaftaas ayaan ku qaabilayaa halka aan caay kaliya ugu shafeeco shacabka Soomaaliyeed waa arrin aan naga socon doonin.
Somaliland waxaa loo aqoonsaday iney tahay maamul beesha Reer Sheekh Isxaq leedahay sidaas darteed waxaa beesha looga baahan yahay maanta iney difaacdaan shacabkooda oo aan leeysku haleeyn maamul liita oo gumeeysiga Ethiopia u shaqeeya.
Cadawga Somaliland maaha Muqdisho laakiin waa Addis Ababa !!